पाँच वर्षदेखि रोकिएको सुनिलको अभिनय ‘कोहि किन बर्बाद होस्’ बाट शुरु हुने ! « रंग खबर
पाँच वर्षदेखि रोकिएको सुनिलको अभिनय ‘कोहि किन बर्बाद होस्’ बाट शुरु हुने !
अभिनयमा पुर्नरागमन गर्दा यही नाटक लाई किन रोज्नु भयो भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन् – “विजय मल्ल सरको यो नाटकसंग मेरा केही व्यक्तिगत सम्झना जोडिएका छन् । यही नाटकको एउटा पात्रको अभिनय गरेर म २०३६ सालमा तत्कालिन नेपाल राष्ट्र प्रज्ञान प्रतिष्ठानको एकवर्षे नाटक तालीमका निम्ति छानिएको थिए“ । दोस्रो कारण यो नाटक मेरो प्रिय भाइ शंकरले निर्देशन गर्दैछन् ।” लामो समय पछि अभिनयमा फर्किएकाले आफ्नो अभिनय चित्त नबुझे खप्की खान तयार भएर बसेको उनि बताउँछन । हाल नाटकको तीव्र रिर्हलसलमा ब्यस्त सुनील आदर्शवादी प्रिन्सिपलको भुमिकामा देखापर्दैछन् ।